Paulo Coelho ရေးသားတဲ့ The Alchemist (အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်)
The Alchemist (အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်) စာအုပ်ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ စာအုပ်ပေါင်း ၆၅ သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်စာအုပ်က ပုံပြင်စာအုပ်ဖြစ်ပြီး အိပ်မက်တွေနောက်လိုက်တဲ့အခါ ခရီးရဲ့သဘောတရားနဲ့ အရေးပါပုံတွေကို သင်ကြားပြသပေးပါတယ်။
ပိရမစ်တွေဆီကို ခရီးသွားပြီး ရတနာတွေကို ရှာတွေ့ဖို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ဦးနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို စတင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက စပိန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဆင်းရဲသားသိုးကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ခရီးသွားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံရရှိဖို့အတွက် သူ့ရဲ့သိုးတွေကို ရောင်းချလိုက်ရပါတယ်။ သူ ခရီးမသွားခင်မှာ ဘုရင်လို့ သူ့ကိုယ်သူပြောကြားတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ထိုလူက သူ့ကို “Urim” နဲ့ “Thummim” လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်တုံးနှစ်လုံးကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးနှစ်လုံးက လူငယ်လေးအနေနဲ့ ဝေခွဲမရတဲ့အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ ကူညီပေးလိမယ့်လို့ အဲဒီလူကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်လေးဟာ သူ့ခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို အီဂျစ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ့် သင်္ဘောဆီမရောက်ခင် ရတနာတွေကို ရှာဖွေဖို့ သူ့ခရီးအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပြီး ငွေတွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်က လမ်းညွှန်အနေနဲ့ ကူညီမယ့်အကြောင်း ပြောပြီး သူ့ကို ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် အဲဒီလမ်းညွှန်က သူ့ကို လိမ်လည်ကာ သူ့ငွေတွေ အားလုံးကို ယူပြီး လူအုပ်တွေထဲမှာ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ခရီးကို ရှေ့ဆက်သွားသင့်၊ မသွားသင့် သူ စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူက သူ့ရဲ့ကျောက်တုံးတွေကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျောက်တုံးတွေက သူ့အိတ်ကတ်အပေါက်ထဲကနေ မြေကြီးပေါ်ကို ကျသွားတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ လူငယ်လေးက ကျောက်တုံးလေးတွေကို ပြန်ကောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိတ်ကတ်က အပေါက်ကို မဖာထေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျောက်တုံးတွေက ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုတ်ကျနိုင်ပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူပဲ ချမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။
သူ့ခရီးအတွက် ပေးဖိုဖို့ငွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့အတွက် သူက အလုပ်ရှာခဲ့ပြီး သူ့ကို ပုံဆောင်ခဲ (ခရစ်စတယ်)ဆိုင်ကို ဖွင့်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က အလုပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်လေးက ဆိုင်ရှင်ကို ဆိုင်ရောင်းအားတွေတိုးလာအောင် ကူညီပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ သူ့ဘ၀အတွက် သူလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ခရီးသွားချင်ပြီး ရတနာကို ရှာဖွေချင်ပါတယ်။ ခရစ်စတယ်ဆိုင်မှာ အချိန်အတော်ကြာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက် သူက ဆိုင်ရှင်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကို ပြန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာ လူငယ်လေးက အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတူတူ ခရီးသွားခဲ့ပြီး လမ်းခရီးမှာ သူတို့ကြုံတွေ့တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ခရီးလမ်းဆုံးကို ရောက်ရှိတဲ့အခါ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်က လူငယ်လေးနဲ့ တောင်ထိပ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေအပေါ် သူ့ရဲ့ကြင်နာမှုအတွက် ရွှေအချို့ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူလည်း အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ် လို့ရမလားလို့ လူငယ်လေးက အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်က လူငယ်လေးကို သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်အတွက်သာ အာရုံစိုက်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြေးနီကို ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်အရာမဆို ပိုကြီးကျယ်တဲ့အရာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကို လူငယ်လေးကို ပြသချင်တဲ့အတွက်လို့ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်လေးက ဘုန်းကြီးနဲ့ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပိရမစ်တွေဆီကို ခရီးသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ လူငယ်လေးဟာ ပိရမစ်တွေဆီကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရတနာတွေရှာတွေ့ဖို့ ကျောက်တုံးတွေကို တူးခဲ့ပါတယ်။ သူအလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ ပင်လယ်ဓားပြအုပ်စုတစ်စုကို သူ့ဆီကို ချဉ်းကပ်လာပြီး သူ့ကို ရိုက်နှက်ကာ အဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်က ပေးလိုက်တဲ့ ရွှေကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ပိရမ်တွေနားမှာ ဘာလုပ်နေသလဲလို့ ပင်လယ်ဓားပြခေါင်းဆောင်က ကောင်လေးကို မေးခဲ့ပြီး ရတနာတွေရှာဖွေနေကြောင်း ကောင်လေးက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ဓားပြက လူငယ်လေးကို လှောင်ရယ်ခဲ့ပြီး သူလည်းပဲ စပိန်က ဘုရားကျောင်းအဟောင်းကြီးအတွင်းကို သွားပြီး ရတနာတွေရှာဖို့ အိပ်မက်ရှိကြောင်း၊ အဲဒီလိုခရီးဝေးသွားပြီး မသေချာတဲ့ရတနာကို ရှာဖွေဖို့ဆိုတာက ရူးမိုက်တဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ခရီးအဝေးကြီးလာတဲ့ ရူးမိုက်မှုအပေါ် ပင်လယ်ဓားပြက ပြက်ရယ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်ဓားပြတွေထွက်ခွာသွားပြီးနောက် လူငယ်လေးက သေသေချာချာတွေးတောခဲ့ပြီး ရတနာတွေက ပိရမစ်တွေဆီမှာ မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ရတနာတွေက ခရီးတစ်လျှောက်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့သင်ယူလေ့လာမှုတွေ၊ မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ရှာဖွေမှုသာဖြစ်တယ်။
ခရီးလမ်းဆုံးရောက်ဖို့ကပဲ အရေးကြီးတာမဟုတ်ကြောင်း ဒီစာအုပ်က သင်ကြားပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်တွေရရှိမှုကိုပဲ အာရုံစိုက်မယ်၊ ခရီးစဉ်တွေရဲ့အရေးပါတဲ့ရှုထောင့်တွေကို လျစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင် ခရီးတစ်လျှောက်မှာ ဘာကိုမှ သင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်သလို အခက်အခဲနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဆက်လက်ခရီးဆက်နိုင်ဖို့အတွက် ခက်ခဲသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အိပ်မက်တွေနောက် လိုက်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေ့လာဆန်းစစ်ရင်းနဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စား၊ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိရှိ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် စမ်းသပ်နိုင်တဲ့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အောင်နိုင်သူတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Paulo Coelho ရေးသားတဲ့ The Alchemist (အဂ်ဂိရတျပညာရှငျ)
The Alchemist (အဂ်ဂိရတျပညာရှငျ) စာအုပျကို ၁၉၈၈ ခုနှဈက ထုတျဝခေဲ့ပွီး နှဈပေါငျး သုံးဆယျအတှငျး အကွိမျကွိမျ ပွနျလညျပုံနှိပျခဲ့ရပါတယျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ စာအုပျပေါငျး ၆၅ သနျးကြျော ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ အဂ်ဂိရတျပညာရှငျစာအုပျက ပုံပွငျစာအုပျဖွဈပွီး အိပျမကျတှနေောကျလိုကျတဲ့အခါ ခရီးရဲ့သဘောတရားနဲ့ အရေးပါပုံတှကေို သငျကွားပွသပေးပါတယျ။
ပိရမဈတှဆေီကို ခရီးသှားပွီး ရတနာတှကေို ရှာတှဖေို့ အိပျမကျမကျခဲ့တဲ့ လူငယျလေးတဈဦးနဲ့ ဇာတျလမျးကို စတငျထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူက စပိနျနိုငျငံမှာ နထေိုငျနတေဲ့ ဆငျးရဲသားသိုးကြောငျးသားလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ ခရီးသှားဖို့ ပိုကျဆံမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ပိုကျဆံရရှိဖို့အတှကျ သူ့ရဲ့သိုးတှကေို ရောငျးခလြိုကျရပါတယျ။ သူ ခရီးမသှားခငျမှာ ဘုရငျလို့ သူ့ကိုယျသူပွောကွားတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပွီး ထိုလူက သူ့ကို “Urim” နဲ့ “Thummim” လို့ချေါတဲ့ ကြောကျတုံးနှဈလုံးကို ပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကြောကျတုံးနှဈလုံးက လူငယျလေးအနနေဲ့ ဝခှေဲမရတဲ့အခြိနျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျဖို့ ကူညီပေးလိမယျ့လို့ အဲဒီလူကွီးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
လူငယျလေးဟာ သူ့ခရီးစဉျကို စတငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ကို အီဂဈြကိုချေါဆောငျသှားမယျ့ သင်ျဘောဆီမရောကျခငျ ရတနာတှကေို ရှာဖှဖေို့ သူ့ခရီးအကွောငျးကို ပွောပွခဲ့ပွီး ငှတှေကေို ပွသခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျက လမျးညှနျအနနေဲ့ ကူညီမယျ့အကွောငျး ပွောပွီး သူ့ကို ခဉျြးကပျခဲ့ပါတယျ။ အခြိနျအနညျးငယျကွာပွီးနောကျ အဲဒီလမျးညှနျက သူ့ကို လိမျလညျကာ သူ့ငှတှေေ အားလုံးကို ယူပွီး လူအုပျတှထေဲမှာ ပြောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ခရီးကို ရှဆေ့ကျသှားသငျ့၊ မသှားသငျ့ သူ စိတျရှုပျထှေးပွီး ဝခှေဲမရဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူက သူ့ရဲ့ကြောကျတုံးတှကေို ထုတျလိုကျပါတယျ။ ကြောကျတုံးတှကေ သူ့အိတျကတျအပေါကျထဲကနေ မွကွေီးပျေါကို ကသြှားတာကို သိခဲ့ရပါတယျ။ လူငယျလေးက ကြောကျတုံးလေးတှကေို ပွနျကောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အိတျကတျက အပေါကျကို မဖာထေးဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြောကျတုံးတှကေ ဘယျအခြိနျပဲဖွဈဖွဈ ပွုတျကနြိုငျပွီး သူ့ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြကို သူပဲ ခမြယျဆိုတာ နားလညျပါတယျ။
သူ့ခရီးအတှကျ ပေးဖိုဖို့ငှလေုံလုံလောကျလောကျရှိဖို့အတှကျ သူက အလုပျရှာခဲ့ပွီး သူ့ကို ပုံဆောငျခဲ (ခရဈစတယျ)ဆိုငျကို ဖှငျ့ထားတဲ့ လူတဈယောကျက အလုပျခနျ့ခဲ့ပါတယျ။ လူငယျလေးက ဆိုငျရှငျကို ဆိုငျရောငျးအားတှတေိုးလာအောငျ ကူညီပေးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒါဟာ သူ့ဘဝအတှကျ သူလုပျခငျြခဲ့တဲ့ အလုပျမြိုးမဟုတျဘူးဆိုတာကို နားလညျခဲ့ပါတယျ။ သူက ခရီးသှားခငျြပွီး ရတနာကို ရှာဖှခေငျြပါတယျ။ ခရဈစတယျဆိုငျမှာ အခြိနျအတျောကွာအလုပျလုပျပွီးနောကျ သူက ဆိုငျရှငျကို နှုတျဆကျပွီး သူ့ရဲ့ခရီးစဉျကို ပွနျစတငျခဲ့ပါတယျ။
လမျးတဈလြှောကျမှာ လူငယျလေးက အဂ်ဂိရတျပညာရှငျတဈယောကျနဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပွီး သူတို့ဟာ မိတျဆှတှေဖွေဈသှားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ အတူတူ ခရီးသှားခဲ့ပွီး လမျးခရီးမှာ သူတို့ကွုံတှတေဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို ဖွရှေငျးခဲ့ကွပါတယျ။ ခရီးလမျးဆုံးကို ရောကျရှိတဲ့အခါ အဂ်ဂိရတျပညာရှငျက လူငယျလေးနဲ့ တောငျထိပျက ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာရှိတဲ့ ဘုနျးကွီးကို ဘုရားဖူးဧညျ့သညျတှအေပျေါ သူ့ရဲ့ကွငျနာမှုအတှကျ ရှအေခြို့ကို ပေးခဲ့ပါတယျ။ သူလညျး အဂ်ဂိရတျပညာရှငျတဈယောကျဖွဈ လို့ရမလားလို့ လူငယျလေးက အဂ်ဂိရတျပညာရှငျကို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဂ်ဂိရတျပညာရှငျက လူငယျလေးကို သူ့ရဲ့ပနျးတိုငျအတှကျသာ အာရုံစိုကျဖို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ကွေးနီကို ရှအေဖွဈပွောငျးလဲပွတဲ့ရညျရှယျခကျြက ဘယျအရာမဆို ပိုကွီးကယျြတဲ့အရာအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျတယျဆိုတာကို လူငယျလေးကို ပွသခငျြတဲ့အတှကျလို့ အဂ်ဂိရတျပညာရှငျက ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
လူငယျလေးက ဘုနျးကွီးနဲ့ အဂ်ဂိရတျပညာရှငျကို နှုတျဆကျပွီး ပိရမဈတှဆေီကို ခရီးသှားခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာ လူငယျလေးဟာ ပိရမဈတှဆေီကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး ရတနာတှရှောတှဖေို့ ကြောကျတုံးတှကေို တူးခဲ့ပါတယျ။ သူအလုပျလုပျနစေဉျမှာ ပငျလယျဓားပွအုပျစုတဈစုကို သူ့ဆီကို ခဉျြးကပျလာပွီး သူ့ကို ရိုကျနှကျကာ အဂ်ဂိရတျပညာရှငျက ပေးလိုကျတဲ့ ရှကေို ယူဆောငျသှားခဲ့ပါတယျ။ ပွီးနောကျ ပိရမျတှနေားမှာ ဘာလုပျနသေလဲလို့ ပငျလယျဓားပွခေါငျးဆောငျက ကောငျလေးကို မေးခဲ့ပွီး ရတနာတှရှောဖှနေကွေောငျး ကောငျလေးက ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။ ပငျလယျဓားပွက လူငယျလေးကို လှောငျရယျခဲ့ပွီး သူလညျးပဲ စပိနျက ဘုရားကြောငျးအဟောငျးကွီးအတှငျးကို သှားပွီး ရတနာတှရှောဖို့ အိပျမကျရှိကွောငျး၊ အဲဒီလိုခရီးဝေးသှားပွီး မသခြောတဲ့ရတနာကို ရှာဖှဖေို့ဆိုတာက ရူးမိုကျတဲ့အိပျမကျဖွဈတယျလို့ ထငျကွောငျးပွောကွားခဲ့ပွီး ခရီးအဝေးကွီးလာတဲ့ ရူးမိုကျမှုအပျေါ ပငျလယျဓားပွက ပွကျရယျပွုခဲ့ပါတယျ။
ပငျလယျဓားပွတှထှေကျခှာသှားပွီးနောကျ လူငယျလေးက သသေခြောခြာတှေးတောခဲ့ပွီး ရတနာတှကေ ပိရမဈတှဆေီမှာ မဟုတျကွောငျး နားလညျခဲ့ပါတယျ။ စဈမှနျတဲ့ရတနာတှကေ ခရီးတဈလြှောကျမှာ ကောငျးမှနျတဲ့သငျယူလလေ့ာမှုတှေ၊ မကောငျးတဲ့အတှအေ့ကွုံတှအေားလုံးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ သူ့ရဲ့ရှာဖှမှေုသာဖွဈတယျ။
ခရီးလမျးဆုံးရောကျဖို့ကပဲ အရေးကွီးတာမဟုတျကွောငျး ဒီစာအုပျက သငျကွားပေးပါတယျ။ နောကျဆုံးပနျးတိုငျတှရေရှိမှုကိုပဲ အာရုံစိုကျမယျ၊ ခရီးစဉျတှရေဲ့အရေးပါတဲ့ရှုထောငျ့တှကေို လဈြလြူရှုထားမယျဆိုရငျ ခရီးတဈလြှောကျမှာ ဘာကိုမှ သငျယူနိုငျမှာမဟုတျသလို အခကျအခဲနဲ့ တှတေဲ့အခြိနျမှာ ဆကျလကျခရီးဆကျနိုငျဖို့အတှကျ ခကျခဲသှားစမှောဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့သာ အိပျမကျတှနေောကျ လိုကျနစေဉျအတောအတှငျးမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လလေ့ာဆနျးစဈရငျးနဲ့ ခရီးစဉျအပျေါမှာ စိတျဝငျစား၊ နှဈသကျတယျဆိုရငျ ပိုပွီးထိရောကျမှုရှိရှိ လလေ့ာသငျယူနိုငျပွီး မိမိတို့ကိုယျကိုယျ စမျးသပျနိုငျတဲ့၊ ဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျတဲ့အောငျနိုငျသူတှေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
The Alchemist was published in 1988 and it has been reprinted for several times during these 30 years. It has been sold more than 65 million copies all over the world. The Alchemist isafable, teaching us about the principles and the importance of journey in pursuit of our dreams.
The story started withaboy who hadadream that he travelled to the pyramids and found the treasures. However, he wasapoor shepherd living in Spain and didn’t have any money to travel so that he needed to sell his sheep to earn some money. Before he travelled, he met withaman who claimed himself asaKing and he gave the boy two stones called “Umin” and “Thumnim” and told him that these stones will help the boy in making decisions when he was uncertain.
Thus, the boy embarked his journey. Before reaching to the ship to carry him to Egypt, he talked about his journey to find the treasures and he showed his money. So, he was approached byaman who told him to help asaguide. The boy trusted him and they travelled together to the market the next day. Afterashort while, he learnt that his guide cheated him, stole all his money and disappeared into the crowds. He was disappointed and uncertain whether he should still go on this journey. Therefore, he took out his stones and realized that the stones were falling onto the ground from the hole of his jacket. The boy picked up the stones but decided not to mend the hole because he realized that the stones could fall out anytime and he would make his own decision.
As to make enough money to pay for his journey, he looked forajob and was hired byaman who run the crystal shop. The boy helped the owner to boost the sales, but he realized that this was not the kind of job he wanted to do for his life. He wanted to travel and seek his treasure. After some times working at the crystal shop, he bid farewell to the owner and started his journey again.
Along the way, he met with an alchemist and they became good friends. They travelled together and solved some of the challenges they met during the journey. Once they have reached the destinations, the alchemist gave some of his gold to the boy and toamonk who hadamonastery on top of the mountain for his kindness towards all the pilgrims. The boy asked the alchemist if he could become one. Then, the alchemist told him to only focus in his goal and destiny and the alchemist explained that his reason of turning the copper into gold was just to show the boy that every element has to evolve into something greater.
The boy said goodbye to the monk and the alchemist to travel to the pyramids. He finally reached to the pyramid and he started digging the rocks to find the treasure. In the middle of his work,agroup of pirates approached him, beat him up and took the gold given by the alchemist. Then, the pirate leader asked him what the boy was doing at the pyramids so that the boy explained him that he was looking for his treasure. The pirate laughed at the boy and told him that he also got suchadream to go and find his treasure inside an old church in Spain, however, the pirate leader thought that it wasasilly dream to travel that far to look for somewhat uncertain treasure and he humiliated the boy for his stupidity of travelling too far.
After the pirates had left, the boy thought deeply and he realized that the treasure was not at the pyramids. The real treasure was his exploration, discovery, both positive learnings and negative experiences, most of all, his evolution process throughout the whole journey.
This book teaches us that not only the destinations matter. If we only focus on the attainment of our end goals and destiny and neglect the important aspects of our journeys, we will not learn anything throughout the entire journey and it will make us grueling to continue on the journeys when we face hardship. Yet, when we are willing to enjoy the journey through self-discovery in pursuit of our dreams, we will learn more effectively and evolve ourselves asatested and determined victors.